Congratulations Saturngod! - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
willy April 2012 edited April 2012 in Daily Life Today ,,,In my office ,,, I've read your wedding invitations card .. .** Have an amazing journey ** မှတ်ချက်များ
day April 2012 Registered Users really? K April 2012 Moderators တစ်ယောက်တော့ စွံသွားပြီး နောက်လူတွေပဲကျန်တော့တယ်။။ v.v @calmhill Unkind April 2012 edited April 2012 Registered Users အဲဒါတစ်ကယ်လားဗျ။ အဲဒါကြောင့်ကိုစေတန်ကြီးအခုတစ်လောMZမှာပျောက်နေပါတယ်လို့။ :P ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Admin ကြီးအတွက်၀မ်းလဲသာပါတယ်။ :-bd :)>- ကဲကျန်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မော်မော် မင်မင် တွေရောဘယ်တော့သတင်းကြားရမှာလဲဗျ။ အဟီး :P PhyoMyanmar April 2012 Registered Users ကိုစေတန်ကြီးရဲ့ မိန်းမဖြစ်ချင်လိုက်တာ :(:Dသူနဲ့ယူပြီးရင် တစ်သက်လုံးမေးချင်တာတွေ ထိုင်မေးလို့ရပီလေ :)ဟိဟိ စတာနော် ... :P Unkind April 2012 edited April 2012 Registered Users PhyoMyanmar said:ကိုစေတန်ကြီးရဲ့ မိန်းမဖြစ်ချင်လိုက်တာ :(:Dသူနဲ့ယူပြီးရင် တစ်သက်လုံးမေးချင်တာတွေ ထိုင်မေးလို့ရပီလေ :)ဟိဟိ စတာနော် ... :P
ကိုစေတန်ကပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားဆိုတော့တစ်ခြား အက်မင် နဲ့ မော်မော်တွေကိုချိန်ပါလား :D အဟီး...နောက်တာနော်အစ်ကို.. :D PhyoMyanmar April 2012 Registered Users ဟိဟိ ...ကို ClamHill ကြီးကျန်သေးတယ် :D CalmHill April 2012 Administrators PhyoMyanmar said:ဟိဟိ ...ကို ClamHill ကြီးကျန်သေးတယ် :D
Unkind said:ကိုစေတန်ကပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားဆိုတော့တစ်ခြား အက်မင် နဲ့ မော်မော်တွေကိုချိန်ပါလား :D အဟီး...နောက်တာနော်အစ်ကို.. :D်
အလိုလေး ကျုပ်တော့ ချမ်းသာပေးကြပါ ဒါပေမယ့် စိတ်မပျက်နဲ့ အားမငယ်နဲ့ @K ရှိပါသေးတယ် သူက အသက်ငယ်ငယ် သဘောကောင်း မနောကောင်း ပါဖြောင့်တယ်။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla